August 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
RASMI: Goorta la ciyaari doono labada kulan El Clasico xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay
Cayaaraha August 31, 2020
(Spain) 31 Agoosto 2020. Xiriirka kubada cagta Isbaanishka ayaa ku dhawaaqay caawa oo Isniin ah, goorta la ciyaari doono kulamada horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2020/21. Jadwalka kulamada horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedka cusub 2020/21 isbuuciisa koowaad oo caawa la sameeyay, ayaa si rasmi ah u bilaaban doona 12-ka bisha September. Kooxda […]Sii akhriso
Rakaabka Allaabtooda Kaga Lunto Garoonka Aadan Cadde Oo Loogu Baaqay Inay Ka Doontaan Saldhiga
Soomaaliya August 31, 2020
Muqdisho.(SONNA):- Taliyaha Saldhiga Booliska Garoonka Diyaaradaha Aadan Cabdulle Kornayl Cabdifataax Bashiir Cali ayaa ugu baaqay rakaabka allaabtooda kaga lunto xilliyada safarada gudaha iyo dibadda ay la soo xiriiraan taliska booliska ee garoonka si ay ugu wareejiyaan alaabtii ka luntay. Taliyaha oo u waramay Warbaahinta Qaranka ayaa ka codsaday Madaxda Wasaaradda Sii akhriso
Jack Grealish oo markiisii ugu horreysay looga yeeray xulka England kaddib markii Marcus Rashford iyo Harry Winks laga saaray safka Saddexda libaax
(London) 31 Agoosto 2020. Jack Grealish ayaa markii ugu horreysay looga yeeray xulka qaranka England kaddib markii Marcus Rashford iyo Harry Winks laga saaray qaranka saddexda Libaax. Jack Grealish ayaa haatan loo yeeray waxaana uu ka soo muuqan doonaa kulammada xulka England uu la kala ciyaari doono Iceland iyo Denmark ee UEFA Nations League. Sida […]Sii akhriso
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo xaqiijisay lambarka cusub ee uu Serge Gnabry xiran doono xilli ciyaareedka cusub
(Munich) 31 Agoosto 2020. Serge Gnabry ayaa xiran doona lambarka 7-aad ee kooxda Bayern Munich xilli ciyaareedka cusub ee 2020/21. Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ayaa xaqiijisay in Serge Gnabry uu xiran doono lambarka 7-aad xilli ciyaareedkan cusub. Serge Gnabry oo dhankiisa ka hadlay inuu qaadan doono lambarkan 7-aad ayaa yiri: “Xaqiiqdii waxaan rajeynayaa […]Sii akhriso
600 Ugandan personnel receive medals from UN Secretary General in Somalia
Somali News August 31, 2020
MOGADISHU (SONNA): – The Secretary General of the United Nations has awarded medals to over 600 Ugandan Officers and Militants serving under the sixth United Nations Guard Unit (UNGU VI) in Somalia. The medals are a recognition of the one-year selfless service by the Officers and Militants in securing the UN facilities and personnel against […]Sii akhriso
Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka Oo Soo Saaray Digniino Ka Dhan Ah Musuqa+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka Sulaymaan Maxamed Maxamuud oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay baaris lagu sameeyay kiisas musuq maasuq ah oo markii hore ka bilowday Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, kadibna lugaha la galay Wasaraado iyo hay’ado kale oo Dowladeed, Ganacsato, shirkado si Sii akhriso
Sii hayaha Xilka RW Iyo Madaxda Wasaaradda Difaaca Dalka Oo Ka Wada Hadlay Dib U Habaynta Ciidamada+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Sii hayaha xilka Ra’iisul Wasaarada Soomaaliya, mudane; Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa manta kulan la qaatay madaxda Wasaaradda Gaashaandhigga iyo hoggaannada ciidamada Qaranka. Kulanka oo ay goob-joog ka ahaayeen Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda difaaca Soomaaliya, Xasan Cali Maxamed (Ammar-dambe) Sii hayaha Wasiiru dowlaha Wasaaradda Sii akhriso
Duqa Muqdisho oo daahfuray ololaha Talaalka Jadeecada iyo Dabeesha+Sawirro
Muqdisho.(SONNA):- Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa daahfuray ololaha Talaalka Jadeecada iyo Dabeesha, kaas oo si wadajir ah looga fulin doono Degmooyinka Gobolka Banaadir. Munaasabadda daahfurka ololahaan waxaa kasoo qeyb galay Wasiiro iyo Xilidhibaanno ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Sii akhriso
Civil Aviation Authorities lay down the foundation of Ugaas Khalif Airport in Beledweyne town
Mogadishu(SONNA)-High profile delegation from the Ministry of Transport and Civil Aviation of the Federal Republic of Somalia, Civil Aviation Authorities and experts on Monday landed at Ugaas Khalif Airport in Beledweyne town in Hiiraan region, SONNA reported. Governor of Hiiraan region, Ali Jeyte Osman together with officials welcomed the delegation at the airport Sii akhriso
Ethiopia seeks US clarification on reported aid cut over dam – WTOP
Ethiopia News August 31, 2020
Ethiopia seeks US clarification on reported aid cut over dam WTOP Ethiopia Seeks US Clarification on Reports of Planned Aid Cut BNN Trump to pull Ethiopia aid over dam dispute with Egypt, Sudan Quartz Africa UK Declassified documents reveal Egypt’s goodwill to cooperate with Ethiopia over Nile water 74 years ago Egypttoday Sii akhriso